Ividiyo: Ungayishicilela kanjani iBlog yakho ku-Twitter | Martech Zone
NgoLwesine, Februwari 26, 2009 NgeSonto, ngoJulayi 27, i-2014 Douglas Karr
Ngiqede le vidiyo izolo ebusuku ukunikeza amaklayenti ethu nge imfundo yokuthi ungayishicilela kanjani ibhulogi yabo ku-Twitter nge Twitterfeed kanye nokuphakelayo kwe-RSS. Kusebenza kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza nge-RSS feed, ngakho-ke ngicabange ukuthi nami ngizokwabelana ngalo lapha!
Tags: okuphakelayo kwezenhlalophakela ku-twitterumabhebhanai-wordpress kwezenhlaloi-wordpress eya ku-twitter
Feb 26, 2009 ngo-10: 33 PM
I-Twitter injalo hhayi RSS!
Feb 26, 2009 ngo-11: 07 PM
Angiqiniseki kahle ukuthi lithini iphuzu lakho, vele i-Twitter akuyona i-RSS. Kodwa-ke, ukushicilela kusuka ku-RSS kuya ku-Twitter kuyindlela ephumelela kakhulu yokwazisa ibhulogi yakho (noma enye indlela esebenzisa okuphakelayo).
Feb 27, 2009 ngo-2: 20 PM
Inkinga yami ngayo ukuthi ayenzi lutho oluwusizo kimi. Uma ngifuna ukwazi lapho uthumela okuthile kubhulogi yakho, ngizobhalisela okuphakelayo kwe-RSS. Noma ngezinga elithile uphendula umbuzo othi "Ngenzani?", Impendulo yokuthi "ngithumele i-X kubhulogi lami kuphela" ingaphendulwa kangcono ngezinye izindlela.
Akulahlekanga kimi ngaleyo ndlela bambalwa kakhulu abantu abasebenzisa i-RSS, nokuthi uzobe usufinyelela labo bantu abasebenzisa i-Twitter kepha hhayi i-RSS ngokusebenzisa i-twitterfeed. Kepha i-Twitter nayo ayihlanganisi yokuphakelayo. Uma othile ezokwenza lokhu, ngibona kungcono ngibabone benama-akhawunti amabili we-Twitter - eyodwa eyenziwe ngabantu kuphela, futhi eyodwa esebenza ngokuhlanganisa nangokukhombisa ama-tweets abo e-RSS feed. Lowo ngumsebenzi omningi ekugcineni komthombo, noma kunjalo.
Ngokusobala, njengoba lokhu kungicasula ngaphezu kwabantu abaningi, futhi ngingakhuluma ngalokhu ekugcineni futhi ngisebenzise iklayenti le-Twitter elihlunga ama-tweets aphethwe yi-twitter, futhi mhlawumbe nesikripthi se-GreaseMonkey ukwenza okufanayo ku-interface yeTwitter.com.
Ngomqondo ojwayelekile, kepha, inkinga ukuthi ukusebenzisa i-twitterfeed ukuthumela ngokuzenzekelayo isihloko sokuthunyelwe ne-URL ayeneli, kuyimeta-data. Ngingalunga uma abantu bengathumela isifinyezo esifanele ku-Twitter ngokuthunyelwe kwebhulogi (hhayi okokuthinta noma isihloko nje), bese bexhumanisa nokuthunyelwe okuphelele. Lokho empeleni kuzobe kungeza inani, nokuthile engingakutholi ngokubona isihloko sokuthunyelwe kumfundi we-RSS.